Home » Wararka » Somalia oo Maraakiib ilaaliya xeebaha loogu sameynayo dalka Holland (SAWIRRO)
Dowaladda Soomaaliya ayaa sameysaneysa maraakiib ilaalisa xeebaha dalka, iyadoona sameynta tiradii ugu horaysay ee maraakiibtaasi oo gaaraya lix markab uu ka socdo, Magaalada Rotterdam ee wadanka Netherlands.
Danjiraha Dowlada Federalka Soomaaliya u fadhiya Wadamada Benelux iyo Midowga Yurub (EU) Dr. Ali Sa’id Faqi, ayaa booqasho ku tagay Dekkada weyn ee Magaalada Rotterdam halkaasi oo lagu sameynayo Maraakiibta.
“Waa guul taariikh ah in Soomaaliya loo sameeyo Maraakiib ilaalisa xeebaha, xilli ay jirto halisyo fara badan oo Soomaaliya ka heysata dhinaca baddaha, hadii ay noqoto burcad-badeeda, kaluumeysiga sharci daradda iyo Istecmaalka qaldan ee marinta xeebaha” Ayuu yiri Danjire Faqi.
Maraakiibtaan ayaa waxaa sameenaya shirkad lagu Magacaabo (Atlantic Marine Offshore) oo iyadu heshiis la xariir sameynta Maraakiibtaan sanadkii 2013 la gashay Xukuumadii uu hogaamin-jiray Dr. Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), gaar ahaan Wasiirkii Gaashaandhiga ee xilligaasi, Cabdixakiim Maxamuud Xaaji Fiqi, waxaana heshiiskaan qeyb ka ah in la tababaro Ciidamadii marakiibta ku shaqeyn laheyd.
Sameynta Maraakiibtaan ayaa qeyb ka ah Howlaha ay Soomaaliya ku dooneyso in ay ku dar-dar geliso Ciidamadeeda dhinaca Badda, kuwaasi oo muhiim u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka ka jira dhinaca xeebaha.
DFS oo joojisay howlihii mashaariic ee Hey’adda Nile ka waday Soomaaliya
M-weyne Xasan oo dalka Rwanda ugu qeyb galaya Shir madaxeedka AU-da